In the heart of southern Africa, land-locked Zimbabwe is a vibrant country with dramatic landscapes, abundant wildlife and all the fun activities and warm hospitality you could ask for on safari.
Zimbabwe boasts big game and diverse wildlife species, plentiful birdlife and highly professional guides ensuring this is the perfect destination for those active and adventurous travellers. Zimbabwe is also home to five Unesco World Heritage sites including the majestic Victoria Falls and the Mana-Sapi-Chewore biosphere, that travellers can explore.
With savannah grasslands in the central and western regions, exotic rainforests around the eastern highlands, and drier woodlands towards the northern tip where the mighty Zambezi River fuels the animal kingdom, Zimbabwe really does exude some of the most stunning terrains.
Top Destinations ‐ Zimbabwe
Top Accommodation ‐ Zimbabwe